10 Maa mma-ulo-ikwū Na France Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Maa mma-ulo-ikwū Na France Site Train
Ị dị ka njem ụgbọ okporo ígwè? Ị dị ka ịhụ ịtụnanya castles mba ndị dị ka France? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, mgbe i ruru nri ebe. Nke ahụ bụ n'ihi na nke a isiokwu “10 Maa mma-ulo-ikwū Na France Site Train” ga-enye gị a definitive ndepụta nke iri kasị maa mma castles na France. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị ga-agwa gị otú ị iru ha n'ụgbọ okporo ígwè!
1. Chateau nke Chenonceau
Chateau nke Chenonceau na-a pụrụ iche otu dị ka ha wuru ya na ntọala nke a na nkume igwe nri na 16nke na narị afọ. Ị nwere ike mfe iru ya site na a ụgbọ okporo ígwè dị ka nnukwu ụlọ bụ nnọọ nso a ebe. Ị nwere ike nweta ya site na Tours, a isi obodo ezi uche nso nnukwu ụlọ.
Nantes na Tours Ụgbọ oloko
Lille na Tours Ụgbọ oloko
Emi odude ke Chantilly Estate, a nnukwu ụlọ bụ n'ezie uru a nleta ozugbo ị na-ahụ otú o si anya. Ọ bụ nso center nke Paris nke na-eme njem na ya a ikuku.
Ee, ọ bụ nyochawa a n'obí, ma onye na-eche, ọ bụ breathtaking! ha wuru Fontainebleau azụ ke 12nke na narị afọ, na ọ ka na-anya nnukwu na-ọma nọ na-. Ọ bụ na- mfe gaa. Ị nwere ike iru ya na Paris na-erughị otu awa na Transilien akara R.
Ị pụrụ ịhụ nke a ọmarịcha obí eze n'ime mba eke park that’s right outside of Paris. Otú ọ dị, na ịga mara mma nnukwu ụlọ ụgbọ okporo ígwè bụ a bit tricky ka e nwere a mgbagharị nke na-aga ozugbo ọ. Ọ dịkarịa ala, i nwere ike ka na-enwe a ụgbọ okporo ígwè na Paris!
Chambord Castle bụ a n'ezie mesmerizing na nnukwu nnukwu ụlọ na nke ahụ bụ uru na-eleta. Na-esi na ya, ị ga mkpa a taxi ma ọ bụ mgbagharị si n'obodo Blois. Otú ọ dị, eru Blois bụ inweta si ọtụtụ obodo na France. Ị nwere ike nweta ya na-erughị otu awa na ọkara mgbe ejegharị ejegharị si Paris.
Nnukwu ụlọ nke Amboise bụ n'etiti ndị kasị maa mma castles na France. Ọ bụ n'ezie ihe ọla nke ije si Renaissance. Ị nwere ike iru Chateau mfe site okporo ígwè site ọtụtụ obodo na France via a TGV ma ọ bụ Intercity ụgbọ oloko.
Anyị ukwuu nwere ike ikwu nke a mara mma, obere na nnukwu ụlọ dị ka ndị a ma ama Alexandre Dumas wuru ya! Ị nwere ike iru Monte Cristo Castle mfe na a obodo ụgbọ okporo ígwè akara dị ka ọ bụ nri na Paris! Ye emi ke ekikere, i nwere ike ọ bụla ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụrụ na ị na-na-abịa site ebe ọzọ.
Ọ bụ a ezigbo ebube obere na nnukwu ụlọ wuru nri ke isuo n'ime a obere ọdọ! Ọ nwere ike ghara inwe ihe ọ bụla prettier karịa nke a. Ị nwere ike nweta na nnukwu ụlọ na-adị mfe site na-ewere ka ọkara otu awa ụgbọ okporo ígwè si n'obodo nke Tours. Mgbe ahụ ị ga-naanị mkpa ka a 20 ije nkeji na nnukwu ụlọ.
Ọ nwere ike ịbụ n'etiti ndị kasị maa mma castles na France, ma anyị nwere na-agụnye ya. Nnukwu ụlọ bụ ọgaranya akụkọ ihe mere eme, na na ọ bụ n'ezie breathtaking, bụghị naanị na ya maa mma ụzọ! The ezigbo ụgbọ okporo ígwè na nnukwu ụlọ bụ na Selestat, na i nwere ike iru ya na Strasbourg ma ọ bụ ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị ya nso.
The Chateau de Pierrefonds bụ doro anya na ọtụtụ ndị kwesịrị ekwesị nke ịbụ na a ndepụta banyere ihe ndị kasị maa mma castles na France. I nwere ike na-eru na nnukwu ụlọ site na-ewere a ụgbọ okporo ígwè na Compiegne, mgbe na-ewere a ụgbọ ala ka Pierrefonds.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe Ama on ụgbọ okporo ígwè njem 10 Maa mma-ulo-ikwū Na France Site Train, ị nwere ike kpọtụrụ anyị site na anyị na saịtị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Leslọ europetravel Travel travelfrance